म मधेशी भएकाले सिङ्गो राज्य र मिडिया मेरोविरुद्ध लागेको छ : हरिनारायण रौनियार | रिपोर्टर्स नेपाल
म मधेशी भएकाले सिङ्गो राज्य र मिडिया मेरोविरुद्ध लागेको छ : रौनियार
२०७५ कार्तिक २७ गते प्रकाशित, l ११:४५
हरिनारायण रौनियार, निलम्बित सांसद
कम्पनीले अहिले एकल तथा अन्य कम्पनीसँग मिलेर ४० वटाभन्दा धेरै पुलको ठेक्का लिएको छ । पप्पु कन्सट्रक्सनले एक्लै निर्माण गर्न लागेको पुलको लम्बाई ५ हजार ७ सय ८० मिटर छ । तर अधिकांश पुलको निर्माण सम्पन्न हुने मिति नजिकिँदै जाँदा पनि काम भने सुरु समेत भएको छैन । भएकाको पनि राम्रो काम नभएको सडक विभागले जनाएको छ । पप्पुका संस्थापक हरिनारायण रौनियारको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । उनै रौनियारसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका कारण तपाई त आलोचित हुनुभयो नि ?
के गर्नु ऋीष जि, म मधेशी भएकाले सिङ्गो राज्य मेरोविरुद्ध लागेको छ । मधेशबाट निर्वाचित भएको सांसद भएकाले यो सब भएको हो ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको ठेक्काअनुसारको काम नगरेकाले तपाईमाथि कारबाही गरिएको होइन र ?
सिङ्गो नेपालको विकास नै सरकारका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । आजको दिनसम्म सरकारले ठेकेदारलाई साढे ३ खर्बभन्दा बढि भुक्तानी दिन सकेको छैन । काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पैसा नदिएपछि कसरी काम गर्ने ? यो प्रश्न अर्थमन्त्रीसँग सोध्नुस् ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध त अख्तियारमै मुद्धा दायर भइसकेको छ । सरकारलाई दोष दिएर हुन्छ र ?
मुद्धा त तपाईलाई पनि लाग्न सक्छ । विगतमा तपाईलाई पनि विभिन्न मुद्धा लागेर भुमिगत हुनुभएको थियो नि । यो सब राज्यसत्ताको आतंकको नतिजा हो । मुद्धा पर्नासाथ त्यो व्यक्ति वा संस्था गलत भन्ने हुँदैन । न्यायालयले सत्य तथ्य पत्ता लगाइहाल्छ नि । कसैले केही भनिदियो भन्दैमा त्यसको पछि लाग्नुहुँदैन । संचारमाध्यमले पनि गतल समाचार दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा लेख्ने पत्रकारलाई कारबाही हुन्छ । हरिनारायण रौनियारको विरुद्धमा जे लेखे पनि छुट छ । मेराविरुद्धमा ९९ प्रतिशत झुट समाचार लेखिएको छ ।
तर तपाईले दर्जनौँ भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्नुभएको छ नि ? भ्रष्टाचार गर्नुभएको आरोप लागिरहेको छ ।
मुखले भनेर त हुँदैन नि । कुनै एउटा अनियमितताको प्रमाण देखाउनुस् न । म ३४ वर्षसम्म निर्माण व्यवसायी थिएँ । तीन वर्ष अगाडि मैले कम्पनी छोडेको हुँ । ३४ वर्षसम्म केही भएन, अहिले सांसद बन्नासाथ मेरा विरुद्धमा सरकार र मिडियाले षडयन्त्र गरेको हो । यो सब जनताले बुझिरहेका छन् ।
तपाईले ठेक्का लिएको पुल भत्किदा नागरिकको ज्यान गएको होइन ?
कुन डिजाइनका कारण बबइ पुल भाँचिएको छ ? पुल भाँचिएको होइन, भासिएको हो । पुल भासिदा मलाई भ्रष्टाचारी भन्न मिल्छ ? अदालतले नै मलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो भने म स्विकार गर्न तयार छु । तर कसैको झुटो आरोप मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।
मिडियाले पनि षडयन्त्र गरेको आरोप लगाउनुभयो । के छ आधार ?
केही मिडियाहरु धारावाहिक रुपमा मेरो विरुद्धमा लागे । मेरो कुरै नसुनी एकोहोरो मविरुद्ध लागियो । मेरो विरुद्धमा ग्राण्ड डिजाइन गर्ने मिडियाहरुलाई मैले भनेको थिएँ, प्रमाण देखाउनुस् । मसँग कुरा गर्नुस् भन्दा गर्न सकेनन् । मिडिया सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्रबैँकको भवन बनाउने जिम्मा तपाईले पाउनुभएको थियो । के भइरहेको छ ?
मलाई होइन, पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको हो । नियमपूर्वक पप्पुले ठेक्का पाएको थियो । तर चार महिना पुगिसक्दा पनि ठेक्का सदर भएको छैन । प्रतिस्पर्धाबाट आएको कम्पनीलाई राज्यले कानुन मिचेर ठेक्का रोक्न खोजेको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन आलोचना र विवादमा परेपछि सरकारले अर्को विकल्प सोच्न नपाउने ?
यो देश कर्मचारीको मनपरीका आधारमा चल्ने हो कि कानुनका आधारमा ? कानुनीराज्य हो भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नै राष्ट्रबैँकको भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्छ । तर मामाथि नियत र षडयन्त्र रचिएको छ ।
सिक्टा सिंचाई आयोजनासँग भएको ठेक्का सम्झौता किन तोड्नुभयो ?
काम गरेको भुक्तानी नदिएकाले हामीले सम्झौता तोडेका हौँ ।
२०७५ कार्तिक २७ गते सम्पादित l १३:३२